Akhri:Jiritaanka Muqdisho oo muran la geliyay,yaa mas’uuliyadaasi leh? | Warfaafiye	Home
Wednesday, June 27th, 2012 | Posted by admin Akhri:Jiritaanka Muqdisho oo muran la geliyay,yaa mas’uuliyadaasi leh?
Dastuurka lagu muransan yahay ayaa shaki geliyay jiritaanka caasimada dalka ee Muqdisho, iyadoo qodobka ka hadlaya maqaamka magaalo madaxda dalka mugdi muuqda uu ka jiro sii jiritaanka caasimada.
Qodobka 9-aad ee Dastuurka oo ka hadlaya maqaanka magaalo madaxda ayaa waxaa ku qoran sidan “Maqaamka Magaalo Madaxda Federaalka Soomaaliya waxaa go’aan looga gaari doonaa dib u eegista Dasrtuurka, waxaana sharci gaar ah kasoo saari doona Labada Aqal ee Baarlamaanka Dowladda Soomaaliya.
Dastuurkii ay soo diyaariyeen Guddigii horay ee la kala diray meesha ayaa laga saaray, waxaana la keenay Dastuur cusub oo kooxo gaar ah soo sameysatay, kaasoo ah midka hada la soo bandhigay.
Ra’iisul Wasaaraha Dowladda KMG Cabdiweli Maxamed Gaas ayaa ololaha uggu ballaaran ee hirgelinta Dastuurkan la soo bandhigay wada, waxaana ku leh Maamulka Puntland ee C/raxmaan Faroole hoggaamiyo.
Shirkii Saxiixayaasha Road Mapka ee Nairobi ayaa Ra’iisul Wasaare Gaas wuxuu jeebka kala soo baxay nuqulo ay ku qoran yihiin Dastuurkaan hada loo ololeynayo in la ansixiyo, taasoo dhalisay khilaaf xoogan.
Dad badan ayaa aaminsan in ololaha ugu ballaaran ay ku lug leeyihiin Madaxweynaha Puntland oo doonaya in Caasimada dalka loo raro Puntland.
Hase ahaatee lama oga go’aanka ay ka qaadan doonaan ergada loo xulayo ansixinta Dastuurkan muranka ka taagan yahay.
Halkan ka aqriso Dastuurka
Posted by admin on Jun 27 2012. Filed under Somali News.
Responses are currently closed, but you can trackback from your own site.	12 Comments for “Akhri:Jiritaanka Muqdisho oo muran la geliyay,yaa mas’uuliyadaasi leh?”
ma	June 27, 2012 - 5:22 pm	war niyahow sh.shariif maxa ka qaldan ????? bal ninka waxas aqbalayo ka waran …
Axmed Moxamed Axmed	June 27, 2012 - 6:39 pm	Waa ku farxi lahayn haddii caasimadda loo raro garoowe si ay ugu guuraan kuwa Xamar meel kasta uga soo hayaamay, isla markaa aan si nabad ah doonayninin in ay dadka degaanka kula noolaadaan.Kuwaaso iska dhaadhiciyay in tuuladii ay ka yimaadeen ay u gaar tahay. Xamarna soomaaliweyn ay u dhaxeeyso?
Marka aan dadka caynkaasi ahi arko, waxaa igu soo dhacdo tixdaan:”Reerkaynu waynoo wadaag kama wakoodeene (kama walwaleen) waxaadiyo waxaygaba aan cuno waalli soo maaha?
Boolaay	June 27, 2012 - 8:27 pm	Aad ayaa ugu xumahay in nin jeebka kala soo baxo Dastuurkii lagu dhaqi lahaa umad oo dhan iyo kuwa aqbalaya.
Sahruuja	June 27, 2012 - 8:28 pm	Faroole hadaan la iska qaban umada ayuu qaribayaa, ee reer koonfur ha tashtaan ayaa qabaa.
abdirahmaan shaam	June 27, 2012 - 8:47 pm	walalal muqdisho hadii la yiri dib haloo dhigo maxuma shakina malahan waayo muqdisho waa caasimada soomaaliya , lakin waxa keenay in lagu murmo waa
1- dadkii muqdisho kunoolaa 1991 oo guryahooda ilaa manta la heysto , lana barakiciyo hantidooda la dhacay
2- hadii ay caasimad ledahy maxaa ku koobay hal bel kaliya maamulkeeda
3-teeda kale walalaha shegta in ay leeyhin muqdisho goof bey ahyed ha asuustan cidna ma daganeyn soomaali baa noolesyey baladna ninkii nooleya aa leh somalina wuu ka dhaxeyaa hadii la rabo in muqdisho noqoto magaalo qabiil leeyhay ogolaada in hantida muqdisho lagu dhisay aad deb u celisan tii la dhacayna la maqgo kadibna yeesha ilah na hanagu wada amansado
Asli	June 27, 2012 - 9:29 pm	Ninkani muxuu ku hadlaaaaa, ma waxaa raali ka tahay Garoowe anaa leh muqdishana waan kula leeyahay, Majeerteen ayaa degan Puntland iyo laboo qabiil oo idinka tirsan, waa ognahay ma hal qabiil ayaa loo geynayaa caasimadii, taas wax la aqbali karo ma ahan ee kaca soomaaliyeey
fiirsade	June 27, 2012 - 10:01 pm	s/c…
weli yaa idin gaaray hawiye waxada geetsateen ayaa hada la idinak gooynooyaa?
22 sano xamar xaaraan ku haaysateen oo bedehseen astaanta iyo miisanka magaalada oo aad ka dhigteen magaalo south iyo north leh.
ilaahay waa caadil!!!
xasan	June 28, 2012 - 2:12 am	Muqdisho qaxootigii ilaa la keeney dhulka xabashida aya soo dhaweysey, xooga lagu dhiseyna abgaal ayaa lahaa, dhismona wax kama taqaanaan, xaaraan ayaa kusoo korteeyn welina ku dhexjirtaan, oo lacagta soo daabacataan ilaah miyaadan ka baqeeynina.
Dhulkan Abgaal ayaa leh, Mataana aa sii leh ninka hada haayana idinka wax idima dhaamo wuu baxayaa ninkii dhoof ku yimidaa geeridu dhibeeysaa waqtigii dhamaadyoo wey dhaqaaqi doonaa.
Osman	June 28, 2012 - 1:51 pm	To; Xasan
Reer mataan markay Abgaal Balad kudilaayeen xageed joogtay, inka Hadda haysto xamar isagaa kaaka roon oo uroon. adigu caliyaalo ayaad lee dahay ee hagaa ji.
josef	June 29, 2012 - 2:01 pm	Waxan hawiyow idin leeyahay ilaa soomaaali xisaabtanto oo wixii aad umadda u geytenn si cadaalad ah looga wada hadlo soomali heshinmayso weligeed.Nasiib darro weli idinkiiba doonaaya inaad somaali u talisaan.
Nur	July 7, 2012 - 3:13 am	Muqdisho beri baa soomaali looga dhigay caasumad. Dabadeed soomaali oo dhan baa timid oo dhisatay. Dabadeed iyadoo loo malaynayo inay muqdisho tahay meel soomaali oo dhan u dhexeysa, ayaa Hawiye yiri ka baxa annagaa leh. Dabadeed markii looga baxay ayay magaaladii iyo qarankiiba burburiyeen. Marka si ayan taasoo kale mar kale u dhicin waa in la xisaabtamaa oo soomaali ay ku heshiiso caasumad kale oo aan cidina sheeganayn. Tusaale in magaalo cusub la dhiso. Haddii kale walle inaan soomaali weligeed is cafiyayn ee runta ha laga hadlo.
ali	July 11, 2012 - 6:22 pm	ali
waxaa cajaaib ah oo lacaadiyeeystay boob bililiqo.i/w/m maanta Umada leedahay muqdisho anaa leh kuligooda waxaay ka imaadeyn. ceelbuur/msigawaay/hoobyo/Dadka leh ilaa maanta waxaa lagu wadaa xaqdaro walaal yalo Ale aan kabaqno waan isnaqaana soomaaliye wsc